Mareykanka ayaa hakiyay heshiiskii adeegga hawada ee uu la galay Belarus kadib afduubkii diyaaradda Ryanair
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Mareykanka ayaa hakiyay heshiiskii adeegga hawada ee uu la galay Belarus kadib afduubkii diyaaradda Ryanair
Airlines • Airport • Aviation • Belarus Jebinta Wararka • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Xoghayaha Saxaafadda ee Aqalka Cad Jen Psaki
"Mareykanka wuxuu joojin doonaa codsigiisa ku saleysan ee ku saleysan Heshiiska Adeegyada Hawada ee Mareykanka iyo Belarus ee 2019," ayaa lagu yiri bayaanka Mareykanka.
Heshiiska Adeegyada Hawada Mareykanka-Belarus ee 2019 waa la hakiyay
FAA waxay kula talisay shirkadaha diyaaradaha ee Mareykanka inay "taxaddar weyn muujiyaan" markay duulayaan hawada Belarusiya
Tallaabooyinka dowladda Belarusiya waxaa looga cambaareeyay adduunka oo dhan inay yihiin argagixiso dowladdu maalgeliso iyo burcadbadeedda hawada.
Xogheyaha Aqalka Cad ee Aqalka Cad Jen Psaki ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Mareykanku uu hakin doono heshiiska adeega cirka ee ay la galayaan Belarus kadib afduubkii ay dowladu maalgelisay ee Ryanair.
"Mareykanku wuxuu joojin doonaa codsigiisa ku saleysan ee ku saleysan Heshiiska Adeegyada Cirka ee Mareykanka iyo Belarus ee 2019," ayaa lagu yiri bayaanka
Shalay, Maamulka Duulista Hawada ee Mareykanka (FAA) wuxuu kula taliyay diyaaradaha hawada Mareykanka inay "taxaddar weyn muujiyaan" markay ku duulayaan hawada Belarusiya.
Hay'addu, si kastaba ha ahaatee, way ka gaabsatay inay ka mamnuuco shirkadaha diyaaradaha inay soo galaan hawada Belarus.
On May 23, a Vilnius-xiran Ryanair Diyaarad ka duushay Athens ayaa lagu qasbay inay caga dhigato garoonka diyaaradaha ee Minsk kadib markii maamulka Belarusia ay "soo warbixiyeen" hanjabaad bambo been abuur ah ayna diyaariyeen diyaarad dagaal oo MiG-29 ah si loo hubiyo in diyaarada ay caga dhigatay Belarus.
Isla markii lagu qasbay inay degto, wakiilada amniga Belarusiya waxay xireen saxafiga mucaaradka Roman Protasevich, oo ka mid ah aasaasayaasha kanaalka Nexta Telegram, iyo saaxiibkiis, Sofia Sapega oo u dhalatay Ruushka, oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradda Ryanair.
Baahnayn in la sheego, bambo lagama helin diyaaradda gudaheeda.